फिल्म नचलेपछि चर्चित अभिनेताले भने, ‘अब अभिनय छोड्छु, बेइज्जती भइरहेको छ’ – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
फिल्म नचलेपछि चर्चित अभिनेताले भने, ‘अब अभिनय छोड्छु, बेइज्जती भइरहेको छ’
By Digital Khabar Last updated Aug 6, 2019 12 0
बलिउड अभिनेता अन्नू कपुर हालै फिल्म ‘खानदानी शफाखान’ मा वकिलको भूमिकामा देखिए । यद्यपि, फिल्मको कहानी रमाइलो थियो । फिल्ममा अन्नू कपुर, सोनाक्षी सिन्हा, बादशाह, वरुण शर्मासमेत सबैले निकै उत्कृष्ट काम गरे तर सायद दर्शकले यति बोल्ड सब्जेक्ट र अन्दाजलाई पचाउन सकेनन् । त्यसकारण फिल्म बक्स अफिसमा खासै चल्न सकेन ।
हालै एक भारतीय संचार माध्यमसँगको कुराकानीमा उनले विभिन्न कुरामा खुलेर चर्चा गरे । अन्नू कपुरले फिल्ममा अभिनय गरेर आफू थाकिसकेको बताए । साथै, उनले अब फिल्म बनाउने बताए ।
यो फिल्मको निर्देशन गरिसकेका छन्ः
अब यी अभिनेताले फिल्म बनाउने सोचिरहेका छन् । हुन त यसअघि पनि अन्नू कपुरले फिल्म बनाइसकेका छन् । उनले सन् १९९४ मा चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, इन्डियाका लागि नाना पाटेकर, मून सेन र बेन्जामिन गिलानीको विषयमा एउटा फिल्म ‘अभयः द फियरलेस’ बनाएका थिए ।
उनको निर्देशनमा बनेको यो फिल्मले त्यो वर्ष बेस्ट चिल्ड्रन फिल्मको अवार्ड पनि पाएको थियो । यद्यपि, त्यसपछि उनले निर्देशन छोडे । अब उनी अहिले आफ्नो निर्देशकको रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न चाहन्छिन् ।
अब भूमिका होइन बेइज्जती पाइरहेको छुः
उनले भने, ‘मेरो भाग्य भनौं मैले निर्देशन गरेको पहिलो फिल्ममा मैले नेशनल अवार्ड पाएँ । तर यति हुँदा हुँदै पनि सायद त्यतिबेला मेरो भाग्यले मलाई निर्देशनमा आओस् भन्ने चाहँदैनथ्यो । त्यसकारण मेरो बाटो अभिनयतर्फ मोडियो । तर अब पुनः निर्देशनतर्फ हिँड्दैछु । मेरा नजिकका थुप्रै मानिसहरुले मैले उनीहरुको फिल्म बनाओस् भन्ने चाहना राख्छन् ।’
अब अभिनय किन छोड्न चाहनुहुन्छ ? या प्रश्नमा हाँस्दै उनले भने, ‘आजकाल वकिलकै भूमिकाका लागि १० वटा यस्ता अफर आउँछन् जसमध्ये दुइवटालाई म अस्विकार गर्छु । मानिसहरुले मलाई यस्तो काम दिन्छन् जुन मैले पहिले नै गरिसकेकी छु । यस्तोमा जब मलाई यस्तो भूमिका अफर गरिन्छ तब मलाई मानिसहरुले रोल नभई मेरो बेइज्जती गरिरहेको जस्तो लाग्छ ।’
उनले थपे, ‘त्यसकारण यदि रोल अफर गर्नु छ भने राम्रो भूमिका दिनुहोस् नभए मलाई अफर नै नगर्नुहोस् । अब मलाई अभिनय गर्नु छैन । म वकिलको भूमिका निभाउँदा निभाउँदै थाकिसकेकी छु । योभन्दा राम्रो त म फिल्म नै बनाउँदा हुन्छ । ’
ह्यारी मगाएर फुटबलका सर्वाधिक महंगा रक्षक
शल्यक्रिया गर्दा बिरामीलाई बेहोस किन बनाइन्छ ?
कंगना रनौटको ट्विटर अकाउन्ट बन्द
विराट र अनुष्काको यो सूत्रलाई मनन गर्दै करीना र सैफ यही रणनीति अपनाउदै
विवाह गर्ने चाहना हरायो – गायिका तथा राष्ट्रिय सभाकी सांसद कोमल ओली
काठमाडौं उपत्यकामा थप ११२ जनामा कोरोना संक्रमण
तीन वर्षमा पनि केपी ओलीलाई तह लगाउन सकिएनः प्रचण्ड
रातारात राजपत्र छापिएर इजलासमा कसरी पुग्यो
अष्ट्रेलियामा ‘सर्च इन्जिन’ नै बन्द गरिदिने गुगलको चेतावनी
नेकपाको मसाल जुलुस बन्द सफल पार्न आव्हान (माघ १० गते बन्द)
ईश्वर पोखरेलको अर्ब भन्दा बढीको सम्पत्ति कहाँबाट आयाे?
चुच्चे नक्सा जारी गरेकै कारण केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाले:…
पठाओ राईडर फुड डेलिभरी एपले ग्राहक र राईडर/चालकको बीमा…
Prev Next 1 of 1,540
९ माघ २०७७, शुक्रबार २१:४५
९ माघ २०७७, शुक्रबार २१:०१
९ माघ २०७७, शुक्रबार २०:४१